၂၀၂၁ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၂၁ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာနိုင်ငံအသင်း
၂၀၂၁ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ မှ မြန်မာနိုင်ငံ အသင်း
၂၀၂၂ မေ ၁၂ (၁၂-၀၅-၂၀၂၂) – ၂၀၂၂ မေ ၂၃ (၂၃-၀၅-၂၀၂၂)
အားကစားနည်း ၂၀ မျိုးတွင် ၂၉၈ ဦး
မြန်မာနိုင်ငံအသင်းသည် ၂၀၂၁ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ သို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ဤပွဲသည် (၃၁) ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကာ ၂၀၂၂ခုနှစ် မေလ ၁၂ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်နေ့အထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ပြိုင်ပွဲကို ၂၀၂၂ခုနှစ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ရသော်လည်း ပြိုင်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်ရာများကို ၂၀၂၁ ဖြင့်သာ သုံးစွဲသည်။
​နေပြည်​တော်တွင် စိုက်ထူ​ထား​သော လှုံ့​ဆော်​ရေးပိုစတာ
မြန်မာနိုင်ငံ အိုလံပစ်ကော်မတီအနေဖြင့် အားကစားနည်း (၂၀)မျိုးတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ကို အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာဝန်ကြီး ဦးမင်းသိန်းဇံ၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးထွန်းမြင့်ဦးတို့က အနီးကပ်ကြီးကြပ် အားပေးခဲ့ကြသည်။ အားကစားနည်း (၂၀) တွင် ယှဉ်ပြိုင်ရာ (၁၆)နည်းဆွင် ဆုတံဆိပ်များ ရရှိခဲ့သည်။ ရွှေတံဆိပ် (၉)ခု၊ ငွေတံဆိပ် (၁၈)ခု၊ ကြေးတံဆိပ် (၃၅)ခု၊ စုစုပေါင်း ဆုတံဆိပ် (၆၂)ခု ရရှိခဲ့ကာ နိုင်ငံအလိုက် အဆင့် (၇) ရရှိခဲ့သည်။ ပထမဆုံးဆုတံဆိပ်နှင့် ရွှေတံဆိပ်ဆုတို့ကို ကူရက်ရှ်အားကစားနည်းမှ ရရှိခဲ့သည်။ ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းသည် ဆုတံဆိပ်ပေါင်း (၁၂)ခု ရရှိခဲ့ကာ အအောင်မြင်ဆုံးသော အားကစားနည်းဖြစ်သည်။
၁.၁ ယှဉ်ပြိုင်သူ အားကစားသမားအ​ရေအတွက်
၃ ဆုတံဆိပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ
၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ အိုလံပစ်ကော်မတီတွင် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ယခင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန မှ အားကစားပိုင်းအား ပြန်လည်ခွဲထုတ်ကာ အားကစားနှင့် လူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ဟနွိုင်းပွဲတော်အတွက် မြန်မာအားကစားသမားများအနေဖြင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် ဧပြီလကပင် စ၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်၊ မန္တ​လေး၊ ​နေပြည်​တော်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံများတွင်စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အားကစားနည်းပေါင်း (၄၀) အနက် (၂၀)မျိုးတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်သည်။
​နေပြည်​တော်ရှိ အားကစား​လေ့ကျင့်​ရေးစခန်း (gold camp)
မြားပစ် ၈ ၅ ၁၃
01 ! ​ရွှေတံဆိပ် ​အေး​အေး​အောင် ကူရက်ရှ် +87kg ၁၁ ​မေ
ခင်ချယ်ရီသက် ပီတန်း Shooting (အမျိုးသမီး) ၁၃ ​မေ
ရဲထွန်း​နောင် ကိုယ်ကာယအလှပြ ၇၀ကီလို ၁၄ ​မေ
သိန်းသန်းဦး ဝူရှူး Nangun ၁၅ ​မေ
​ပေါက်စ ဘိလိယက်နှင့်စနူကာ English Billiards (Single) ၁၇ ​မေ
ဗိုဗီနမ် Female Couple Hand Practice:Dual form ၁၈ ​မေ
ပိုက်​ကျော်ခြင်း နှစ်​ယောက်တွဲ (အမျိုးသမီး) ၁၉ ​မေ
ဗိုဗီနမ် Male Multiple weapon pratice against 03 others with weapon ၂၀ ​မေ
ဗိုဗီနမ် Male leg attack technic 04 males each performs2leg attack technique ၂၂ ​မေ
02 ! ​ငွေတံဆိပ် ဖြိုး​ဆွေဇင်​ကျော် ကူရက်ရှ် - 70kg (အမျိုးသမီး) ၁၃ ​မေ
မင်း​ဇော်ဦး ကိုယ်ကာယအလှပြ ၈၀ ကီလို ၁၄ ​မေ
ခင်​မောင်​ကျော် ၈၅ ကီလို
စန္ဒီဦး ဝူရှူး ​ထောက်လု (အပြ)
စုလှိုင်ဝင်း ဝူရှူး ၆၀ ကီလို (ဆန်းဆို) ၁၅ ​မေ
ရဲထွန်း​နောင် ​သေနတ်ပစ် ၅၀ မီတာ ပစ္စတို (အမျိုးသား) ၁၇ ​မေ
​ကနူးလှေ​ မီတာ ၁၀၀၀ (K4M) ၁၈ ​မေ
ခင်မာဆယ်¹ ​ပြေးခုန်ပစ် မီတာ ၁၀၀၀၀ (အမျိုးသမီး)
ဇင်​မေထက် ​ပြေးခုန်ပစ် ၂၀ ကီလိုမီတာ လမ်း​လျှောက် (အမျိုးသမီး) ၁၉ ​မေ
​ဒေစီဦးဂျူးလီးယက် တိုက်ကွမ်ဒို -49kg (kyorugi)
ခြူးမြတ်နိုး​ဝေ ဂျူဒို - 57kg
နွယ်နီပွင့်လှိုင် ဂျူဒို -63kg
​မေဟန်နီ​အောင်လွင် ဗိုဗီနမ် Female Single Weapon prctice:Ying Yang Sword Form ၂၀ ​မေ
ခိုင်ဝါဖူး ဗိုဗီနမ် Female Single hand practice:Dragon tiger form
ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ English Billiards Double
​သေနတ်ပစ် 10m Air Pistol Mixed team ၂၁ ​မေ
​မောင်တင်ထူး​ဇော် ဗိုဗီနမ် Male Single weapon practice four element staff form
နိုင်လတ် လက်​ဝှေ့ ၂၂ ​မေ
1ပြေးခုန်ပစ်အားကစားနည်းမှ မခင်မာဆယ်သည် မူလက ကြေးတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။ ငွေတံဆိပ်ဆုရရှိသော ဗီယက်နမ်အားကစားမယ်၏ ဖိနပ်သည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း စင်္ကာပူမှ ကန့်ကွက်ခဲ့၍ ပြိုင်ပွဲမှ ထုတ်ပယ်ခဲ့ရာ မခင်မာဆယ်သည် ငွေတံဆိပ် ပြောင်းလဲချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
03 ! ကြေးတံဆိပ် ခင်ခင်စု ကူရက်ရှ် 48kg (အမျိုးသမီး) ၁၀ ​မေ
​ကျော်မင်းသန်း ကိုယ်ကာယအလှပြ 55kg (အမျိုးသား) ၁၃​ ​မေ
စိုးမြင့်ထွန်း ကူရက်ရှ် 73kg (အမျိုးသား)
​လှေ​လှော် နှစ်​ယောက်တွဲ (အမျိုးသမီး) W2
ဝင်းသူရိန်ထွန်း ပီတန်း Shooting (အမျိုးသား)
လှေ​လှော် W2X ၁၄ ​မေ
ချယ်ရီသန်း ဝူရှူး ၅၂ ကီလို (ဆန်းဆို) ၁၅ ​မေ
မျိုးမင်းထက် ၇၀ ကီလို (ဆန်းဆို)
သက်ဖြိုးနိုင် ကနူး​လှေ ၁၀၀၀ မီတာ (C1W) အမျိုးသမီး ၁၇ ​မေ
ပီတန်း Mixed Triple
မြားပစ် Recurve Team (အမျိုးသမီး) ၁၈ ​မေ
ကနူး​လှေ မီတာ ၁၀၀၀ (C4M)
​ဇော်လင်းထက် တိုက်ကွမ်ဒို -63 ကီလို (Kyorugi)
နှင်းသက်​ဝေ ဗိုဗီနမ် -55 ကီလို (အမျိုးသမီး)
​မေလ (၁၈) ရက်​နေ့အထိ ဆုတံဆိပ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။
အားကစား 01 ! 02 ! 03 ! စုစု​ပေါင်း
မြားပစ် ၀ ၀ ၁ ၁
​ပြေးခုန်ပစ် ၀ ၂ ၀ ၂
ဘိလိယက်နှင့် စနူကာ ၁ ၁ ၁ ၃
လက်​ဝှေ့ ၀ ၁ ၂ ၃
ကိုယ်ကာယအလှပြ ၁ ၂ ၁ ၄
ဂျူဒို ၀ ၂ ၂ ၄
ကနူး​လှေ ၀ ၁ ၆ ၇
ကူရက်ရှ် ၁ ၁ ၂ ၄
​လှေ​လှော် ၀ ၀ ၃ ၃
ပီတန်း ၁ ၀ ၂ ၃
ပိုက်​ကျော်ခြင်း ၁ ၀ ၃ ၄
​သေနတ်ပစ် ၀ ၂ ၀ ၂
တိုက်ကွမ်ဒို ၀ ၁ ၃ ၄
ဗိုဗီနမ် ၃ ၃ ၆ ၁၂
အ​လေးမ ၀ ၀ ၁ ၁
ဝူရှူး ၁ ၂ ၂ ၅
၉ ၁၈ ၃၅ ၆၂
​နေ့ ရက်စွဲ 01 ! 02 ! 03 ! စုစု​ပေါင်း
၁ ​မေ ၈ ၀ ၀ ၀ ၀
၂ ​မေ ၉ ၀ ၀ ၀ ၀
၃ ​မေ ၁၀ ၀ ၀ ၁ ၁
၄ ​မေ ၁၁ ၁ ၀ ၀ ၁
၅ ​မေ ၁၂ ၀ ၀ ၀ ၀
၆ ​မေ ၁၃ ၁ ၁ ၄ ၆
၇ ​မေ ၁၄ ၁ ၃ ၂ ၆
၈ ​မေ ၁၅ ၁ ၁ ၂ ၄
၉ ​မေ ၁၆ ၀ ၀ ၀ ၀
၁၀ ​မေ ၁၇ ၁ ၁ ၂ ၄
၁၁ ​မေ ၁၈ ၁ ၂ ၄ ၇
၁၂ ​မေ ၁၉ ၁ ၄ ၇ ၁၂
၁၃ ​မေ ၂၀ ၁ ၃ ၄ ၈
၁၄ ​မေ ၂၁ ၀ ၂ ၈ ၁၀
၁၅ ​မေ ၂​၂ ၁ ၁ ၁ ၃
စုစု​ပေါင်း ၉ ၁၈ ၃၅ ၆၂
မြန်မာနိုင်ငံအသင်းသည် မြားပစ်အားကစားနည်း၌ (၁၃)ဦးဖြင့်ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုက်မည်ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်သူ ​ဒေါ်သီသီဝင်း၊ နည်းပြများအဖြစ် ယွန်​ဗြောင်ဆန်း၊ ဦး​အောင်သူရ၊ ဦးလင်းနိုင်၊ ​ဒေါ်မြတ်သူဇာမြင့်တို့က ​ဦး​ဆောင်ကြသည်။ ကစားသမားများမှာ
မြန်မာအားကစားအဖွဲ့သည် ဘိလိယက်နှင့် စနူကာပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်တို့၌ စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်နေကြကာ ပွဲစဉ် (၆)ခုတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကာယအလှပြ (ကာယဗလ) ပွဲစဉ်များသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အားကစားသမား (၁၁)ဦးကို စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်ထားသည်။ ထိုအားကစားသမားများသည် ၅၅၊ ၆၀၊ ၆၅၊ ၇၀၊ ၇၅၊ ၈၀၊ ၈၅ ကီလိုတန်း ပြိုင်ပွဲများ၊ Athletic Physique (အမျိုးသား)၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး ပွဲစဉ်များတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၉ရက်​နေ့တွင် စခန်းသွင်း​လေ့ကျင့်​နေ​သော ကာယဗလ​မောင် မိုး​ဆွေမှာ ​လေ့ကျင့်​နေစဉ် မ​တော်တဆမှုဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ 
မြန်မာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းသည် အုပ်စု (အေ) တွင် ကျရောက်ကာ အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်နှင့် တစ်အုပ်စုတည်းဖြစ်သည်။
အချိန်ဇုန်သည် (UTC +07:00) ဖြစ်သည်။
၈ မေ ၂၀၂၂ (၂၀၂၂-၀၅-၀၈)
Việt Trì အားကစားကွင်း
ဒိုင်လူကြီး: Mohammad Issa
၁၀ မေ ၂၀၂၂ (၂၀၂၂-၀၅-၁၀)
Việt Trì Stadium
Jovin Bedic 34', 38' (pen.)
၁၃ မေ ၂၀၂၂ (၂၀၂၂-၀၅-၁၃)
၁၅ မေ ၂၀၂၂ (၂၀၂၂-၀၅-၁၅)
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဖူဆယ်အသင်းသည် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၃ရက်နေ့မှစတင်၍ လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။ နည်းပြချုပ်အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံသား ဘန်လက်ချာယိုဝန်က ကိုင်တွယ်သည်။
ဒေါက်တာရဲမွန်ထွဋ် – အဖွဲ့​ခေါင်း​ဆောင်
ဦးရဲဝင်းထွန်း – အသင်းမန်​နေဂျာ
ဘန်လက်ချာယိုဝန် – နည်းပြချုပ်
ဦးဌေးမြင့် – လက်​ထောက်နည်းပြ
ဦးကျော်ဇင်ညွန့် – လက်​ထောက်နည်းပြ
ဦးထွန်းထွန်းလတ် – ဂိုးနည်းပြ
တဝမ်ဝတ်တီ – ကြံ့ခိုင်​ရေးနည်းပြ
မြန်မာအသင်းအနေဖြင့် ဂျူဒိုအားကစားနည်းတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာအသင်းသည် ကူရက်ရှ်ပွဲစဉ်များတွင် ဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ​မေလ (၁၀)ရက်​နေ့တွင် ကျင်းပ​သော (၄၈) ကီလိုဂရမ်ပွဲစဉ်၌ ခင်ခင်စုက ​ကြေးတံဆိပ် ရရှိခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ဆုတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။ (၁၁) ရက်​နေ့တွင် (၈၇) kg ပွဲစဉ်၌ ​အေး​အေး​အောင်က ​ရွှေတံဆိပ် ရရှိခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံး ​ရွှေတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအသင်းသည် ကနူး/ကယက်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှေများတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အားကစားသမား (၁၇)ဦး၊ နည်းပြ (၃)ဦးဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် စခန်းသွင်း လေ့ကျင့်နေသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှေ အတွက် အားကစားသမား (၁၂)ဦးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင် လေ့ကျင့်ခဲ့သည်။
​မေလ (၁၃)ရက်​နေ့တွင် နှစ်​ယောက်တွဲပွဲစဉ်မှ ​​​​ရွှေဇင်လတ်နှင့် နီလာဝင်းတို့က ကြေးတံဆိပ်ဆု ရရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၁ဟနွိုင်းပွဲတော်တွင် သေနတ်ပစ်အားကစားနည်း၌ ပွဲစဉ် (၂၂)မျိုး ထည့်သွင်းကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ မြန်မာအသင်းမှ ရိုင်ဖယ် (၈)မျိုး၊ ပစ္စတို (၈)မျိုး စုစုပေါင်း (၁၆)မျိုး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "(၃၁) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာအားကစား အဖွဲ့များအား အောင်နိုင်ရေး အလံအပ်နှင်းခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ"။
↑ စစ်ကိုင်း၊ တနင်္သာရီနှင့် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌများအား တာဝန်မှ အနားယူခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနအချို့ကို ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်။
↑ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်း မြန်မာအားကစားအဖွဲ့များအား လာရောက်တွေ့ဆုံ အားပေးလမ်းညွှန် အမှာစကားပြောကြား။
↑ (၃၁)ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် နေပြည်တော် လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၌ အားကစားနည်းများလေ့ကျင့်နေ။
↑ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာဘိလိယက်နှင့် စနူကာအဖွဲ့ ပြင်ဆင်။
↑ "(၃၁) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲအတွက် ကာယဗလ အားကစားသမားများ လက်ရည်စစ် ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပမည်"။
↑ "ဆီးဂိမ်း (စ်) ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကာယဗလမောင် တစ်ဦး လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်နေစဉ် မတော်တဆဖြစ်ပြီး သေဆုံး"။
↑ အာဆီယံဖူဆယ်ပြိုင်ပွဲနှင့် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲအတွက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသားဖူဆယ်အသင်း စတင်ပြင်ဆင်။
↑ (၃၁) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဂျူဒိုအားကစားသမားများ စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်။
↑ ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ၌ ကနူး/ကယက် အားကစားနည်းဖြင့် ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိရန် မျှော်မှန်း။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၂၁_အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဝင်_မြန်မာနိုင်ငံအသင်း&oldid=744529" မှ ရယူရန်
မြန်မာနိုင်ငံအသင်း၏ အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၆:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။